संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथग्रहण (फोटोफिचर) ! « MNTVONLINE.COM
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथग्रहण (फोटोफिचर) !
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा विभिन्न पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको समुपस्थितिमा नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, अध्यक्ष तथा सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित एक समारोहबीच पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराइएको हो ।
उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि सहभागिता थियो । संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त र अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीश राणा र सदस्य तथा आयुक्तलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुख आयुक्त तथा अध्यक्षले शपथ गराएका थिए ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु बाढी अपडेटः ७ जनाको मृत्यु, बेपत्ताको खोजी जारी !
वाग्मती प्रदेशमा ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट (पूर्णपाठ) !
उपत्यकाको निषेधाज्ञा आजदेखि केही खुकुलो, यी क्षेत्रहरूलाई बनाइयो केही सहज !
देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता, यस्तो भयो सहमती !